ယောက်ျားကို မိန်းမနှင့် ချိတ်သည် | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 24/05/2022 14:08 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, စုံတွဲနှင့်လိင်
သင်သိချင်တယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်က မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်မိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ လွယ်ကူသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ဆက်ဆံရေးကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ကို မသိသော အမျိုးသမီးများစွာရှိပြီး တစ်ချိန်ချိန်တွင် ၎င်းသည် ညှိုးနွမ်းစေပါသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မိန်းမနဲ့ ချိတ်ထားတယ်ဆိုတာ သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါအတွက် အဓိကကျတဲ့ အကြံပြုချက်တချို့ကို ပေးချင်ပါတယ်။ ကိလေသာသည် မီးပွားကို မြဲမြံစေ၏။
Relationship တစ်ခုကို စလုပ်ရင် မေ့ပျောက်မသွားအောင် အမြဲလုပ်ရမယ်။ လိုင်းကိုထိန်းပြီး အရာအားလုံးကို ပုံမှန်မဖြစ်ပါစေနဲ့. ယေဘူယျအားဖြင့် အမျိုးသားများသည် ချိုသာသည်၊ ကြင်နာတတ်ပြီး နားလည်သဘောပေါက်လွန်းသော အမျိုးသမီးများကို နှစ်သက်ကြသည်။
1 ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မိန်းမနဲ့ ချိတ်တာ ဘာလဲ။
2 ယောက်ျားတွေက မိန်းမမှာ ဘာကိုရှာတာလဲ။
2.4 ဉာဏ်ပညာနှင့် အသိပညာ
2.6 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု
2.7 မင်းကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာ ကြိုက်တယ်။
ထိုလူနှင့် နေရခြင်း၏ ချမ်းသာခြင်း နှင့် လက်ခံမှုတို့သည် ဒုတိယအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အရာအားလုံးထက် သာလွန်သည်။ သူ့ခံစားချက်တွေကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိပြီး သူ့ကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ အကြံဉာဏ်တစ်ခုထက် ပိုပေးတတ်သူဟာ သူတို့နှစ်သက်တဲ့အရာပါပဲ။
ထောက်ပြနိုင်သည်ထက် အဓိပ္ပါယ်ပိုများသောအချက်မှာ ဤလက်တွဲဖော်သည် သစ္စာရှိ၊ ယုံကြည်ထိုက်သူ၊ သစ္စာစောင့်သိသူ၊ လေးစားဖွယ်ရှိပြီး၊ အားလုံးထက်၊ ဟာသဉာဏ်ရှိသင့်သည်။ နားထောင်တတ်သူ၊ လိင်ကိုနှစ်သက်သူ၊ ချက်ပြုတ်နည်းကို သိသူနှင့် ရိုမန်တစ်ဆန်သူပင် ဖြစ်တတ်သည့် အမျိုးသမီးသည် ယောက်ျားကို မိန်းမနှင့် ချိတ်မိစေမည့် အသေးစိတ်အချက်များဖြစ်သည်။
ယောက်ျားတွေက မိန်းမမှာ ဘာကိုရှာတာလဲ။
El တူညီသောအရာများရှိပြီး တူညီသောအရသာကို မျှဝေပါ။ ဘဝဆိုတာ လင်မယားနှစ်ယောက်ကို အမြဲတစေ စုစည်းစေတဲ့အရာတွေပါ။ အမျိုးသားတစ်ဦးမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆီသို့ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောသော့များသည် ပြောင်းပြန်ဖြင့် ညီတူညီမျှ အလုပ်လုပ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် အချို့အရာများဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ။
သံသယဖြစ်စရာ၊ ပထမဦးတည်ချက်သည် မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး ၎င်းသည် အပေါ်ယံပုံပေါက်နေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအယူအဆဖြင့် မိမိကိုယ်ကို လှည့်စားမည်မဟုတ်ပါ။ အကြံဉာဏ်က ချောမောပြေပြစ်သွားခြင်း၊ ဒါပေမယ့်လည်း ဝိသေသလက္ခဏာတွေကို မီးမောင်းထိုးပြပါ။ သဘာဝအတိုင်း လှပခြင်း။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အလှတရား၏အထဲ၌ မကျရောက်နိုင်ဘဲ အခြားသူများကဲ့သို့ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အနံ့မွှေးခြင်းသည် သင့်ကို စွဲဆောင်စေသော အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ရေမွှေးလုပ်ငန်းတွင် ရနံ့တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ယခုအချိန်တွင် မည်သူမဆိုရရှိနိုင်ပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအရ ၎င်းကိုအသုံးပြုရခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ သဘာဝအရှိဆုံးနှင့် မှတ်သားထားချင်ဆုံးသော အနံ့လက္ခဏာတစ်ခုရှိသည်။ အိမ်သာကောင်းကောင်း ၀တ်ဖို့ မမေ့ပါနှင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝ အနံ့ဆိုးတွေနဲ့
၎င်းသည် ပြန်လည်သုံးသပ်သူများ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသော အခြားအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း တန်ဖိုးနီးပါးတူညီပါသည်။ အသံနှင့်အသံအတိုးအကျယ် သူတို့သည် တေးသွားနှင့် လှည့်စားနိုင်သည်။
ဓါတ်ပုံသည် လူကို စွဲလန်းစေသော်လည်း နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဉာဏ်ရည်၊ ဒါထက် အများကြီး ပိုဖမ်းနိုင်သေးတယ်။ ရှိလျှင် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး တင်းမာမှုအခိုက်အတန့်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့နည်းနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတာက ယောက်ျားက သူ့ကိုနေစေတယ်။
နေကြတ်ခြင်းသည် လူကိုမြင်ခြင်းထက် မည်သည့်အရာမျှ မရှိပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီး၊ မဆိုင်းမတွ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲနှင့် လုံခြုံမှုမရှိသော အရာအားလုံးထက်၊ အပြည့်အ၀ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ဘဝကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာ သူတို့ သိကြပါတယ်။
ပါဝင်သည် မိမိကိုယ်ကို ဖူလုံရေးသည် ဤလုံခြုံရေးတွင် ပါဝင်လာသည်။. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဋိပက္ခများကို အမှီအခိုကင်းကင်းနှင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏အကူအညီမပါဘဲ ဖြေရှင်းနိုင်ပါက၊ သူမသည် အမျိုးသားတစ်ဦးအတွက် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှီအခိုကင်းတဲ့ လူတွေက ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။၎င်းတို့သည် ထိုစိတ်ဖိစီးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်နှင့် အခြေအနေတိုင်းကို ရင်ဆိုင်ရန် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ရှိရန် ၎င်းတို့ကို သိထားရမည်ဖြစ်သည်။ အေးအေးဆေးဆေး သရုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်း ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိသည်။ တင်းမာမှုအခိုက်အတန့်ကို အခိုင်အမာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ စီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုသည် လူကို ချိတ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် မင်းမှာရှိတာကို တန်ဖိုးထားဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့အချက်အတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ သူ့အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်အတွက်ပါ။ ဤအရာအားလုံးသည် တည်ငြိမ်မှုကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကို သိရှိခြင်းအတွက် ၎င်းတို့၏ လွတ်လပ်ပြီး ပြတ်သားသောနည်းလမ်းအတွက် အခြေခံတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
မင်းကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာ ကြိုက်တယ်။
အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့၏လွတ်လပ်မှုကို နှစ်သက်ကြပြီး အမျိုးသားများစွာလည်း နှစ်သက်ကြသည်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာကို လေးစားဖို့က အရေးကြီးတယ်။ သူနဲ့ အရာအားလုံးကို မျှဝေခံစားဖို့ တွယ်တာမနေပါနဲ့၊ သူလိုအပ်တဲ့ နေရာလေးကို မပေးဘဲနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် အလုပ်မှ အိမ်ပြန်လာပြီး မိနစ် 30 မျှ အနားယူရန် ထိုင်လိုသောအခါ ၎င်းသည် သူ့ကို ထိုနေရာကို ပေးရခြင်းနှင့် တူညီသည်။
အဲဒါကြောင့် ရှိဖို့ကောင်းပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို လုံးဝလွတ်လပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ တခြားလူတွေကို အားကိုးမနေပါနဲ့။ ပံ့ပိုးမှုသည် အမြဲကောင်းမွန်သော်လည်း တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုအပေါ်တွင် အဆက်မပြတ် မှီခိုနေရသည့် အလေ့အထကို သင်မ၀င်ရောက်သင့်ပါ။
ထို့အပြင်၊ အမြဲတမ်းတက်ကြွနေပြီး အသစ်ကိုနှစ်သက်သော လက်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ ဖြစ်ပါစေ။ ပြတ်ပြတ်သားသား ၎င်းသည် ပြဿနာများကို အမှီအခိုကင်းစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း ခေတ်မီပြီး စွန့်စားရဲဝံ့သူဖြစ်သည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်တွေအားလုံးက ယောက်ျားကို စွဲလမ်းစေတဲ့အရာတွေလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မိန်းမနဲ့ ချိတ်တာ ဘာလဲ။
နောက်ကျောမှာ ဆံပင်တွေ ဘာကြောင့်ပေါက်လာပြီး ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ